Android 9.0 Pie | နှင့်ပျော်မွေ့မည့် Sony ဖုန်းများ၏စာရင်းနှင့်ရက်စွဲများ Androidsis
Sony ဖုန်းများအနေဖြင့် Android 9.0 Pie ရရှိမည့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
၏တရားဝင်ရောက်ရှိကတည်းက အန်းဒရွိုက် 9.0 Pieမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကမည်သည့်ထုတ်ကုန်များက Google operating system ကိုပျော်မွေ့ကြမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ Sony ကကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်အချို့ပေးထားပြီးသူတို့စတင်မွမ်းမံတော့မည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာပေမယ့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုပြသခဲ့သည် ဘယ် OS ကဒီ version ကိုလက်ခံလိမ့်မယ်ယခု ရထားနဲ့အတူစီစဉ်ထားတဲ့ရက်စွဲနဲ့အခြားမော်ဒယ်များကိုငါတို့သိပြီးသား.
အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းငယ်များတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်သည် ထုတ်လုပ်သူသည်ဤ Android version ကို Xperia XZ terminal များသို့ပေးလိုသည်, ယနေ့ခေတ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရဖုန်းများနှင့် Xperia series XA တို့ကြောင့်အခြားမိသားစုများမှအခြားမော်ဒယ်များမှာမသေချာမရေရာနိုင်ပါ။ က Xperia L2ကျေးဇူးပြု၍ အနာဂတ်တွင် ၉.၀ ပေအထိအဆင့်မြှင့်ပါ။
1 ဒီနှစ်မှာ Android 9.0 Pie ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မယ့် Sony ရဲ့ high-end
2 Sony မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Android 9.0 Pie ကိုလာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည်
ဒီနှစ်မှာ Android 9.0 Pie ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မယ့် Sony ရဲ့ high-end
Sony Xperia XZ2 ပရီမီယံ
Sony Xperia XZ ပရီမီယံ
ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များပြီးသားထုတ်ဖော်ပြသထားပြီး, ဒါပေမယ့်မရသောအခါအထူးသဖြင့် လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအလယ်လောက်မှာပါ.
Sony မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Android 9.0 Pie ကိုလာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Sony Xperia XA2 က Ultra
Sony Xperia XA2 Plus အား
ရက်စွဲကိုကြေငြာခြင်းနှင့်အတူထုတ်ပြန်သောစာရင်း၏အသစ် update ကိုအသစ်သောဤဖုန်းများထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် သေချာပါတယ် Android Oreo ၏ဆက်ခံသူအားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းခံစားရမည်။ သို့သော်ဂျပန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်လကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကိုမူအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းလာမည့်နှစ်အစောပိုင်းအထိသူတို့စတင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Mid-range ကို update လုပ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Sony ဖုန်းများအနေဖြင့် Android 9.0 Pie ရရှိမည့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Google က Android နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နားကြားကိရိယာတွေအတွက်အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်
ဂီတသမားများအတွက်အကောင်းဆုံး Android app များ